Horjooge kooxda UGUS ka tirsanaa oo isku soo dhiibay dowladda Soomaaliya – Radio Muqdisho
Horjooga haan ka tirsanaa kooxda nabaddiidka UGUS ayaa isku soo dhibay ciidanka xooga dalka ee ku sugan magaalada Xudur ee xarunta gobolka a Bakool kaas oo lagu magacaabo Bashaan Cali Xasan oo Al Shabab dhex deedda looga yaqaano Maxamed Cali.
Bashaan ayaa ahaa madaxiii kooxda amniyaadka burcaddimeedka UGUS ee goboladda Shabeelaha Hoose iyo Bakool waxaana uu imin gacanta ugu jiraa ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed ee ku sugan gobolka Bakool.
Korneel C/raxmaan Maxamed Cusman “ Timada cadde” Taliyaha Ciidamanka Milatariga Bakool oo la hadalay Radio mudisho ayaa tilmamay in horjoogahaani uu muhiim u aha a kooxda UGUS.
Taliyaha ciidanka xoga ee gobolaka Bakool ayaa tilmamay in horjoogahaan isku soo dhiibay dowlada Soomaaliya ay ku socdo baritaano isla markaana uu xoog badan oo laxariirta kooxda al-shabaab uu siiyey.
Maxkamadda gobolka Banaadir oo xukuno kala duwan ku riday eedeysanayaal"Dhegeyso"